१० वर्षमा बि'हे गरेकी हसिनाले जन्माइन् १३ वर्षमै यति राम्री छोरी। भाले, घिउ, कपडा, चामल र उपचार फ्रि (भिडियो हेर्नुहोस) - Onlines Time
१० वर्षमा बि’हे गरेकी हसिनाले जन्माइन् १३ वर्षमै यति राम्री छोरी। भाले, घिउ, कपडा, चामल र उपचार फ्रि (भिडियो हेर्नुहोस)
August 7, 2021 onlinestimeLeaveaComment on १० वर्षमा बि’हे गरेकी हसिनाले जन्माइन् १३ वर्षमै यति राम्री छोरी। भाले, घिउ, कपडा, चामल र उपचार फ्रि (भिडियो हेर्नुहोस)
बिरामि आमालाई १५ महिनाको बच्चा बेचेर उपचार गर भनेपछि ,कठै रु’वाबासि (हेर्नुस् भिडियो )
बैवाहिक बर्षगाठमा यसरी सजिइन अनिता !
सामाजिक अभियान्ताको देउवालाई सुझाव: कुलमान घिसिङ लाई पुन: नियुक्ति गर्नुहोस
सारा नेपाली च*कित् हुनेगरि चीनले सकायो यस्तो काम, यसरी ल्याउँदैछ नेपालमा रेल Nepal China railway. (भिडियो हेर्नुहोस्)